Word Cross 1.0.92 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.0.92 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
သငျသညျဟောင်းခေတ်စကားလုံးရှာဖွေရေး interfaces ငြီးငွေ့ဖြစ်ပါသလား
★★★အခုတော့သင်က နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင် ကို download လုပ်ပါနဲ့ အခမဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ ပေါ်မှာကစားနိုငျပါသညျ! ★★★
နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို Cross ဦးနှောက်စိန်ခေါ်မှုများအဘို့သင့်စိတ်အားထက်သန်လာအောင်နှိုးဆွနိုင်သည့်တစ်ဦးဖန်တီးမှု crossword ပဟေဠိဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်လုံးဝစွဲ & Entertainment ခံစားရစေရန်စကားလုံးအဲန်ဂျီအိုများဂိမ်းအပေါငျးတို့သအနှစ်သာရပါဝင်သည်။
➤နယူး & လတ်ဆတ်တဲ့မျှော်: သင်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများနှင့်ပဟေဠိဂိမ်းကစားလိုပါလျှင်, သင်သည်သင်၏ပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်အဘို့စင်ကြယ်လတ်ဆတ်တဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ UI ကိုချစ်ရမည်။
➤နေရာလေးကို & Play လွယ်ကူ: သင်အလွယ်တကူတိကျတဲ့ဝှက်ထားသောစကားလုံးဖွဲ့စည်းရန်စာလုံးပွတ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာလူတိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်ရန်ကစားရန်လွယ်ကူပြီးပျော်စရာပါပဲ။
➤အံ့သြစရာအပိုဆု: နေ့စဉ် Login နှင့်နေ့စဉ်ဆုကြေးငွေရလည်း, သင် crossword ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ပစ္စုပ္ပန်ကိုမကျင့်သောအပိုစကားထွက်ရှာတွေ့ပြီးနောက်ဒင်္ဂါးပြားရပါလိမ့်မယ်။
➤ 2,000 ကျော်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စိန်ခေါ်မှုများ: ဒါဟာလွယ်ကူသောစတင်သည်နှင့်အစာရှောင်ခြင်းအားစိန်ခေါ်ဖြစ်လာသည်။ သင်သိသောစကားသည်သင်၏န့်အသတ်ကိုစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုများသောအဆင့်ဆင့်သွားလာရင်းဖြစ်ကြသည်။
➤ 100% ကိုစှဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဂိမ်း: သင်ကမှုန်ဝါးသောအချိန်ကာလများကိုတွေ့ကြုံခံစားဘယ်တော့မှမယ်! တခါဒီ crossword ပဟေဠိ Play နှင့်သင်ချထားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်!
- အက္ခရာ၏အမိန့်ကိုပြောင်းလဲရန် "မွှေနှောက်" ခလုတ်ကိုထိပုတ်ပါ
- ကိုအသာပုတ်သင်ဖမ်းရသည့်အခါ "သူငယ်ချင်းများမေးပါ" နှင့်ဆုလာဘ်ရ
- သဲလွန်စရရန် "အရိပ်အမြွက်" ခလုတ်ကိုထိပုတ်ပါ
- ဗီဒီယိုများ purchasing သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ဒင်္ဂါးပြားတွေနဲ့ပိုပြီးအရိပ်အမြွက် Get
•သင်တို့အဘို့အ Nice & Clean ဘုတ်အဖွဲ့ (စိတ်ကြိုက် themes များအဘို့အညှိနေပါ)
• 2000 စိန်ခေါ်မှုများ ထက်ပို
• နေ့စဉ်အပိုဆု အရအခမဲ့
• ရိုးရှင်းသော & လွယ်ကူ ကစားရန်, ဂိမ်းရိုက်နှက်ရန်ခက်ခဲ
•အဘယ်သူမျှမ network ကိုလိုအပ်သည်နှင့်အသင်သည်မည်သည့်အချိန်ကစကားလုံးရှာဖွေရေးခံစားနိုငျ
သင့်ဦးနှောက်ကိုလေ့ကငျြ့စတင်ယခု DOWNLOAD နှင့်ပျဉ်ပြားပေါ်မှာစကားလုံးရှာဖွေရေးပဟေဠိတစ်ခုကိုမှန်ကန်မာစတာဖြစ်လာ!
Word Cross အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Word Cross အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
paula-chen-store စတိုး 271 368.06k
APK ဗားရွင္း 1.0.92
Release date: 2019-08-09 11:33:13